Wadamada dadkii ku dhintey diyaaradii Itoobiya oo la sheegay iyo Somali ku jirta - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Wadamada dadkii ku dhintey diyaaradii Itoobiya oo la sheegay iyo Somali ku jirta
Waxa goor dhaweyd shirkada Itoobiya airline sii daysay wadamada ay ka soo jeedaan dadkii ku dhintey diyaaradii saaka ku burburtey meel u dhow caasimada dalkaasi, waxana ku jira hal qof oo baasaboor Somali wata.
Waxaanasdmoodaa in aduunka oo dhan ay la socdeen oo wadamada badankooda ay uga jiraan qof qof. Waxaanse aan la ogaan karin in ay jiraan Somali baasabooro ajaanib ah wata oo ka mida kuwa la raaciyay dalalka sida Kanada, Maraykanka, Yurub iyo wadamada kale ee Afrika sida Kiiniya iyo Itoobiya.
Waxa la soo faqay inta badan meydka oo wada gubtey ayagoo oo qaarkood aan la garanayn.
Shirkada samaysay diyaarada ayaa sheegtay inay la socoto burburka diyaaradaas ayna warbixin ma soo saari doonto waxa keenay burburkeeda. Shirkadan diyaaradan weyn samaysay ayaa ku faani jirtey waxase hadda dalalku ka fiirsan doonaa inay dib i iibsadaan
Dadka ugu badan ee ku dhintey diyaaradan ayaa ka soo jeeda Kiiniya oo 32 qof ah, waxa ku xigta Kanada oo 18 ah ayna soo raacaan wadamada Shiinaha, Maraykanka iyo Yurub oo min 8 iyo 7 qof ah.
Waxa kale oo ku jira dhimashada hal qof oo ka soo jeeda Jabuuti